Askar Ka Tirsan Milateriga Turkiga Oo Sheegay In Ay La Wareegeen Awoodda Dalkaas | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Askar Ka Tirsan Milateriga Turkiga Oo Sheegay In Ay La Wareegeen Awoodda Dalkaas
Inqilaabka ay askartani sheegteen inay ku qabsadeen awooddii xukunka ayaa kusoo beegmaya xili uu caasimada Istanbuul uu ku sugan yahay Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo oo Shalay Gaadhay Dalka Turkiga
Askar ka tirsan milateriga Turkiga ayaa sheegay in ay la wareegeen awoodda dalkaasi, ka dib markii la arkay diyaarado dagaal oo joog hoose ku dulmaraya caasimadda Ankara. Ciidanka ayaa xidhay buundooyinka Bosphorus iyo Fatih Sultan Mehmet ee ku yaalla magaalada Istanbul.
Telefishinka CNN Turk iyo wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegaya in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu badqabo, balse ma aanay sheegin halka uu ku sugan yahay.
Ra’iisul wasaaraha Turkiga, Binali Yildirim, ayaa sheegay in milateriga dalkaasi ay “fuliyeen fal aan loo idmin” balse aanu afgemi ahayn.
Waxa uu intaa raaciyay in aanay jirin wax dhibaato u geysan kara dimuqraadiyada Turkiga.
Mr Yildirim ayaa sheegay in ciidanka ammaanka ay xaaladda faraha ku hayaan.
Inqilaabka ay askartani sheegteen inay ku qabsadeen awooddii xukunka ayaa kusoo beegmaya xili uu caasimada Istanbuul uu ku sugan yahay Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo oo Shalay Gaadhay Dalka Turkiga, isla markaasina ma jiraan wax war ah oo aanu ka helnay xubnaha madaxweyne Siilaanyo weheliya ee ku sugan Turkiga.